MX Linux: Inokurumidza, Shamwari Distro Ine Anoshamisa Maturu | Kubva kuLinux
MX Linux: Inokurumidza, inoshamwaridzika distro ine anoshamisa maturusi
Luigys toro | | Kugoverwa, GNU / Linux
Zvekubatana kwe antiX uye nharaunda dzekare MEPIS, iyo inokatyamadza MX Linux inoberekwa https://mxlinux.org/, iyo inoshandisa maturusi akanakisa uye hunhu hwedunhu rega rega, pahwaro hwe Debian akatsiga. Iyo iri yepakati-huremu inoshanda sisitimu, yakagadzirirwa kusanganisa yakajeka uye isina kurema desktop senge XFCE ine yakapusa setup, yakasimba kugadzikana, uye yakasimba robust performance.
Izvo zvakakosha kuti uzive, kuti kunyangwe iko kugovera uku kuchibva paDebian, inoshandisa tekinoroji yeSysvinit kutsiva yakanyanya kuvandudzwa systemd, chimwe chinhu icho pakuwanda chinova mukana mukuru. Saizvozvowo, nekuda kwekudzikama kwayo kwepamusoro, nyore kudzidza curve, nharaunda yakakura, uye kutaridzika kwakanaka, MX Linux inounzwa senge isina kunetseka sisitimu yemhando dzese dzevashandisi.
Chikwata che MX Linux Atove achishanda pane akasiyana mavhezheni e distro yake kwemakore matatu, yekupedzisira kusvika yaive iyo MX-16 «Kugadziriswa», iyo yatakaedza uye tinokuunzira maitiro ayo.
1 Chii chinonzi MX-16 "Metamorphosis"?
2 Zvimiro zveMX-16 «Metamorphosis»
2.1 Kuita kweMX-16 «Metamorphosis»
2.2 MX-16 «Metamorphosis» kunyorera
3 Dhawunorodha MX-16 «Metamorphosis»
4 Mhedziso paMX Linux 16 «Metamorphosis»
Chii chinonzi MX-16 "Metamorphosis"?
Iyo ndiyo yazvino vhezheni yeMX Linux distro, iyo yakagadziriswa nechinangwa chekuve isina kureruka distro, yakavakirwa paDebian 8.6 'Jessie', inosanganisa maficha kubva kwakasiyana siyana antiX kugoverwa neiyo Xfce 4.12.2 desktop nharaunda. , pamusoro pekushongedzwa neLinux kernel 3.16 yeiyo 32-bit vhezheni uye iyo Linux kernel 4.7.0 yeiyo 64-bit vhezheni.
MX-16 «Metamorphosis» chikamu chegadziriro system AntiX uye inosanganisira basa uye mazano anoshandiswa naWarren Woodford kune rake MEPIS chirongwa. Pamusoro peizvi, ivo vanosanganisira Backports uye zvekunze zvinowedzera kune avo Zorora kuchengetedza zvikamu zvezviitiko.
Iyi distro ine compactness yekumisikidzwa kweEFI pamwe neyeakanakisa driver driver.
MX-16 faira maneja
MX Linux Installer
MX Apt Notifier
Zvimiro zveMX-16 «Metamorphosis»
Iyo yakagadzika distro, iri nyore kuisa, iyo ine yakanakisa Hardware kuzivikanwa uye otomatiki kumisikidza yechero mhando yemushandisi.
Izvo zvinoonekwa zvekuparadzirwa uku zvinochengetedza, nekuti vagadziri vayo vakasarudza kugadzikana uye kuita pamusoro pehunhu hwakajeka, asi izvi zvinogona kuvandudzwa zviri nyore uchishandisa xfce zvigadziriso.
Iyo ine mukana wekugadzirisa iwo mapaneru nenzira yakapusa, iyo inobvumira kumisikidzwa kwechiitiko kurira uye ine yakazara bhuku remushandisi. Nenzira imwecheteyo, inouya nemukana wekuyedzwa seLiveUSB nekushingirira kwakaitwa.
Vashandisi ve AMD, Nvidia uye Broadcom Wi-Fi machipisi vanofanirwa kuzorora zviri nyore, nekuti kuyedza kwakawanda kwave kuenda mukubatanidza vanoisa vanosangana nezvinodiwa zvehardware yakadaro.
Kuita kweMX-16 «Metamorphosis»
Bhutsu yakazara yeMX-16 mumuchina chaiwo une 2gb yeRam yaive 26 masekondi. Zvinoenderana neHTOP, yekushandisa ndangariro yakaramba iri pazasi pe distro seXubuntu iyo zvakare inoratidza iyo XFCE desktop. Sisitimu yekutanga inomhanya chaizvo sekuvhara. Naizvozvo muchikamu chino hapachina zvimwe zvekutaura.
MX-16 «Metamorphosis» kunyorera
Iwo maficha makuru ekuti distro iyi inotipa ndeaya anotevera:
Bhurawuza: Firefox 50.0.2
Vhidhiyo mutambi: VLC 2.2.4
Mimhanzi maneja / Player: Clementine 1.3.1
Mutengi Wetsamba: Thunderbird 45.5.1
Hofisi otomatiki: LibreOffice 5.2.2
Kudzoka: LuckyBackup 0.4.8
Chengetedzo: Passwords uye maKeys 3.14.0
Terminal: Xfce4 Chiteshi 0.6.2
Nenzira imwecheteyo, inouya yakagadzirirwa izvi zvimwe zvinoshandiswa:
Rarama: Gadzira Live USB, Remaster chishandiso, Snapshot.
Kugadziriswa: Kugadziriswa kwebhutsu, Flash maneja, Menyu mupepeti, Mushandisi maneja
Installers uye Software Mamaneja: Broadcom maneja, Codecs installer, Default tarisa, Panzvimbo kutarisisa, Sarudza ruzha, Sisitimu ruzha, Kugamuchirwa, Apt notifier, Tarisa Apt GPG, Debian Backports installer, Package installer, Repo maneja, Test Repo mugadziri
Zvishandiso: Tsvaga masheya, Chinja mushandisi, USB unmounter.
Vana Mapurogiramu: Preschool, Primary, nezvimwe.
Graphics: ImageMagik, Inkscape, nezvimwe.
Network: Skype, Dropbox, nezvimwe.
Ofisi otomatiki: GnuCash, Adobe Reader, Caliber, nezvimwe.
System: KDE, LXDE, MATE, nezvimwe.
Audio: Audacity, DeaDBeeF, Pithos, nezvimwe.
Video: DVDStyler, MPlayer, OpenShot, nezvimwe.
Dhawunorodha MX-16 «Metamorphosis»
Unogona kudhawunirodha iyo MX-16 ISOs zvese zviri zviviri 32-bit uye 64-bit kubva pano. Inogona kunyorwa paCD / DVD kana USB.
Kana iwe usingazive kupisa ISO pane yako usb tinokurudzira ichi chinyorwa Gadzira LiveUSB ine terminal
Mhedziso paMX Linux 16 "Metamorphosis"
Ini pachangu, iyi distro inoita seinooneka inonakidza, inoshanda uye ine anonakidza maturusi. Ndinofara kuva neimwe nzira kure ne systemd, asi ini ndinosuwa kushaya mamwe maficha zvakanyanya kusvika pari zvino kana uchishandisa Debian (yakatsiga), kunyange zvichikosha kuziva kuti kanenge bhurawuza neLibreOffice kana iri yemazuva ano.
Saizvozvo, ine nhevedzano ye MX zvishandiso Ivo vanokodzera kuyedza, uye yavo diki kwazvo inoshungurudza kumisikidza inoita kuti ini ndiwedzere mapoinzi mazhinji mune chero mhando reongororo.
Mukupedzisa, kana iwe uchida imwe yakajeka asi inoshanda kwazvo kugoverwa kweLinux Ndinokukurudzira bvunzo MX Linux 16. Iko kuita kwacho kungori kunakidza uye kunooneka kwakanaka uye kunoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » MX Linux: Inokurumidza, inoshamwaridzika distro ine anoshamisa maturusi
Kuparadzira kunoshamisa, ndanga ndiinako kwevhiki uye ndinofara, nekukurumidza uye kugona.
Kushamisika uye kugutsikana kwazvo, zvinokurudzirwa zvakanyanya kunyanya makumi matanhatu nenhanhatu nekuda kweiyo musimboti yainoshandisa, sezvo makumi matatu nematatu anoshandisa 64, musimboti une dambudziko neBluetooth. Kwakanaka distro.
Iyo yekutanga 32-bit vhezheni yekushandisa kwese kugovera iyo inonongedza zvakananga iyo isiri-PAE kernel. Kune izvo zvega zvinofanirwa kuremekedzwa kwangu kwese uye kunyatso kuyedzwa.
Ini handizive chandatadza, ini ndakaisa iyo 32 bit vhezheni mune uefi modhi, inova iyo inotsigirwa nelaptop, yakapedzisa kumisikidza asi kana ichitanga haina kutakura mashandiro, inoramba iri nemavara yeyero
Lobo pamwe iwe unofanirwa kuzviita neyese sarudzo. Ini ndinofunga kuti kana iwe ukagadzira iyo mufananidzo inokupa iwe sarudzo iyo iwe yaunogona kusarudza uefi kana ese ari mairi modes. Kune chero 32 kana 64, musimboti, hazvina basa, panguva yebhutsu uye kumisikidzwa, inogona kuve nekukosha gare gare kana uchishandisa zvimwe kana zvishoma zviwanikwa.
Pindura kune Zvimwe
Rafael Gonzalez akadaro
Ndakaedza iyo 32 bit vhezheni uye ikaburitsa ese mana AMD Phenom X4 CPUs nenzira isina kujairika yekurovera system; ipapo ini ndakaisa iyo 4-bit vhezheni uye ini ndakawana sisitimu inoshanda nemazvo, uye kunyangwe yakagadziridzwa kupfuura xubuntu, uye linux mint xfce, wandinayo ane rudo rukuru kune linuxero; muchidimbu, yega yega Hardware inyika.
Pindura kuna Rafael González
Mashandisiro ekushandisa iTunes paLinux
Maitiro ekuisa Discord paLinux